> Resource > YouTube > Sida loo geliyaan Photos in YouTube
Sida aynu wada ognahay, YouTube waa ku weyn yahay, waayo, la wadaago videos. Laakiin sidoo kale waxaa loo isticmaali karaa si ay u geliyaan sawiro oo la abuuro duubey in dhowr ilbiriqsi. Geedi socodka waa cajiib fudud:
Gasho xisaabtaada YouTube oo guji Upload . Markaas maraan in ka badan si ay u Photo slideshow oo guji Samee . In daaqadaha pop up ah, dooro sawiro aad rabto in aad geliyaan. Waxaad ka heli kartaa sawir ka albums sawir ama your computer.
Markaas riix Next iyo dooran track maqal ah maktabadda hoos Audio ama sax No audio si aad play slideshow music la'aan. Waxa kale oo aad sameyn kartaa muddo slide iyo dar saamayn slideshow ama kala guurka haddii aad rabto.
Marka aad samaysay, guji Upload oo geli sharaxaad ama tag macluumaadka. Waxaad Had iyo jeerba kartaa slideshow si gaar ah haddii aadan rabin in la dunida oo dhan wadaagaan slideshow ah.
Laakiin ka kor ku xusan waxaynu og nahay in YouTube kaliya waxay bixisaa qaar ka mid ah hawlaha aasaasiga ah ee qaadashada slideshow. Oo waxaa uusan u oggolaadaan in aad geliyaan files audio ka your computer. Sidaas waxa haddii aad rabto in aad slideshow shakhsiga ah ee YouTube? Halkan waxaan aad ugu boorinayna ah kii sameeyey u fududahay in la isticmaalo slideshow in Uploads aad mashruuca si toos ah u YouTube, taasi Fantashow ! Just Raac tallaabooyinka hoose si aad u aragto sida aad gali kartaa sawiro in YouTube iyadoo la abuurayo slideshow fantastik ah.
1 in Saxiix iyo dooratid style video jecel
Marka ugu horeysa waa in aad kala soo bixi oo ay maamulaan Fantashow. Haddii aanad lahayn xisaab Wondershare ah, guji Saxiix ee dhinaca kore ee midig inay la soo wareegto xisaab. Haddii aad hore u leedahay mid ka mid ah, riix in saxiix gali cinwaanka email iyo password aad si aad u bilowdo.
Markaas tab Style aad tegi doonaa. Halkan waxa aad dooran kartaa in ka badan 200 Hababka movie premade munaasabadaha kala duwan sida arooska, dhalashadiisa, safarka, Easter iyo in ka badan. Guudmar saamaynta iyo Riix codso inuu ku soo bilowdo abuuraya aad slideshow u gaar ah.
2 dar dambe ku taaban gaarka ah si aad video
Ka dib markii in, waxaad tagi doonaa si ka shakhsiyeeyo tab in lagu daro xubno ka badan si aad video. Halkan waxa aad isticmaali kartaa iyo jiididda iyo hoos u sawiradaada guddiga sheekada. Markaas laba jibaar guji file bartilmaameedka in dalagga, ku dar saamayn ama mudada dhigay.
Si ka duwan YouTube, waxaad ku dari kartaa music gaar ah ka computer. Si tan loo sameeyo, ka tago si tab Audio iyo jiididda iyo hoos u file maqal ah si hoose ee waqtiga.
Ka sokow in, waxa kale oo aad beddeli kartaa video style ama codsan Hababka dheeraad ah si aad filim guriga ka sii il-qabad.
3 photos Upload in YouTube
Haddii wax walba waa OK, kaliya ka dhacay dhoofinta iyo aad u yeelan doontaa in la helo in qaabka wax soo saarka horena ee YouTube Video ayaa horay waxaa ka mid ahaa in Fatanshow ee laguugu sahlo. Dhamaan inaad hadda samayso waa ku buuxi macluumaadka aad xisaabta iyo guji Share . Dhowr daqiiqo ka dib, aad video waxaa si toos ah gelin doonaa gal YouTube.
Ku raaxayso muunad abuuray by Fantashow: